Akulona ethandwa kulezi zinsuku igama Christian uCyril linomlando othakazelisayo kakhulu futhi abashisekeli ezingokomoya enamandla. umsuka Its ngesiGreki, ngokwezwi nezwi lisho "Nkosi" noma "umbusi." Abesilisa egqoke leli gama kufanele bazazi nomvikeli wabo saint, futhi ukukhumbula hlola usuku St uCyril.
Abalungile enegama uCyril
Orthodox, kusukela ngekhulu IV, kuya abangcwele ukubalwa phakathi ezintathu kweshumi olungileyo, lelo gama wahlala ensimini ka eMbusweni WaseByzantium, eMbusweni waseRoma oseNtshonalanga neRussia. Omunye wabantu bokuqala e-Ubuntu efakwe ohlwini Kirill, uMphathi edolobheni waseGibhithe wase-Aleksandriya. Yena wakhazinyuliswa cishe 451. Isenzakalo esidume kunazo zonke ezakhamizi zethu nabo - nguCyril ka Radonezh Sergiya Radonezhskogo nobaba, abaqala wathatha ekupheleni ukuphila yezithembiso lezindela, bese kuthi uCyril Belozersky. St uCyril kwaba umsunguli umbono ka izindela ukukhanyiselwa kanye oluphelele enkonzweni zenhlalo of the Church.
Njalo nje abafana ekubhapathizweni okuthiwa Christian lasendulo ogama lakhe behlonipha St. uCyril, le enlightener lwamaSlav. Njalo saint ngempela has umfanekiso waso iconographic. Usuku ekugubheni usanta suku ngokuthi u-Angela. Futhi iningi usanta ngezinye izikhathi ibizwa ngokuthi ingelosi umqaphi. Igama elithi kunemibandela futhi akayena ngempela lesifanele. Lena ehluke ngokuphelele ubuntu essence yomuntu ehlukile. Omunye zokubonisa maqondana nomvikeli wabo saint kuyinto isikhalazo ngomthandazo ngokusebenzisa isithombe sakhe iconographic. Isithonjana - ewindini emhlabeni engenhla. It kufanele abe nesandla lokuhlushwa sangaphakathi umuntu.
Eqinisweni, kuvela isithombe esehlukile. Kumawebhusayithi ezingenakubalwa bamenyiwe ukuthenga izithonjana abangcwele kanye Virgin nge iziqondiso eziningiliziwe mayelana nokuthi yini ngempela lokhu noma lokhuya isithombe kuyasiza. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukuba hlangabeza kholwa okuthiwa abanekhono uzokweluleka, onikezwe futhi kuleso simo, kufanele sithandaze. Lokhu qakala okushiwo sublime isithonjana izinto ezejwayelekile zenkolo. Izizathu kokubili zokungazi abefundisi kuphela, futhi isifiso banal ukuze uthole inzuzo: amakhasimende ukukhokhela imiphumela. Kwezinye amathempeli ungabona inani layo likwenza ubone, efana isiphakamiso emkhakheni wokuziphilisa amasevisi, ukunikela ukukhonza ethandaza St cishe yalokho yibhange: .. Izinto elahlekile, mayelana search yimpumelelo ngoba umkhwenyana Ungamlimazi amazinyo akho, njll kuyathuthukiswa nokuthi ukuntula ikhono kholwa ukuhlonza isithombe ongcwele izidakamizwa Pharmacy. Ngathenga paracetamol umthamo - futhi kwakuba lula. Iphutha eziyingozi kakhulu futhi ekugcineni kungaholela emiphumeleni engemihle. Phela, umlilo ngeke nje afudumele, kodwa futhi kanzima ushise. Okungase kube ukuphila ukuba nesibhamu umcebo omkhulu futhi ngeke akwazi ukuwasebenzisa ngendlela eyamukelekile. Kusukela lenqwaba imifanekiso ngeke umusa wanezela, kodwa isimo sengqondo kunalokho abanganaki futhi bengafaneleki kubo kungenziwa ajeziswe. isithombe Engcwele kudinga hlonipho ezifanele. You azi ukuthi iyiphi ngomthandazo ngaphambi kokuba isithonjana kungasiza ekunciphiseni ababhekene nanoma iyiphi inkathazo.
Indlela hlola imifanekiso santa
Isithonjana kumele kungabi sengqondo esifana incwadi noma izithombe ezilondolozwe eshalofini, lapho ungakwazi ukujabulela ngaso sonke isikhathi. Uma thina zitholwa isithombe njengomuntu olungile, ngisho isithonjana kulencane kudinga sengqondo esifanele enenhlonipho. Ukuhlonipha imifanekiso santa, kumelwe siqale ukutadisha ukuphila zasemhlabeni archetype. It uletha ukuthula kwangaphakathi umuntu ekhuleka ongumvikeli. Ngakolunye uhlangothi, ukuba kwenye ungubani umgamu ngulona ikakhulu microcosm we ndoda yasemhlabeni, ukukhombisa ukunakwa wakhe enenhlonipho.
Kufanele nakanjani babe isithonjana endlini yokuba umkhulumeli wakhe wasezulwini, okuwukuthi, lo saint, ngemva kobani okuthiwa umuntu. Musa nje ukugcina endaweni ethile ekhabetheni ngemuva ingilazi njengoba isikhumbuzo. Lapho ubuka Isithonjana kumele sibe nabo nsuku zonke ngomthandazo ukuba umxhasi, okungenani kafushane. Futhi ayethanda ukuba nginakekele close by umsebenzi olungileyo - the ongumvikeli umsebenzi. Ngokwesibonelo, e-St uCyril, le enlightener lwamaSlav, esenziwa lwemishikashika phakathi nokuphila emhlabeni, is ngokwesiko kubhekwe lo ongumvikeli kothisha nabafundi. Kanye umlweli ibandla wasendulo, Bishop of Hippo lifanelwe udumo shumayeli omkhulu futhi umbhali. Isithonjana St. Cyril - unengelosi nomvikeli zemfundiso yenkolo Orthodox, wajabulela ukuthi ukuhlonishwa kwalab 'izazi zemfundiso yenkolo ukukhathazeka.
Kuvele ungumuntu ohamba phambili kunabo eMpumalanga Ephakathi
St uCyril khona sibalo okungavamile isonto, futhi ngakolunye uhlangothi - nomele ejwayelekile nkathi yakhe. kokuzalwa kwakhe, usuku oluqondile engaziwa. Yena uvela emndenini yizicukuthwane ngesiGreki. Ngo-Alexandria kwakukhona uhlobo ngokulandelana dynastic e sabaphathi. Isiko seluqaliwe by uMbhishobhi Omkhulu u-Athanasius, ogama owalandela umshana wakhe, uPetru. Futhi uCyril wathatha kwesitulo emva kokufa umalume wakhe Theophilus. Ngokusho kwesazi-mlando isonto USocrates omkhulu waseConstantinople, ekubekweni Kirill ubephelezelwa kwemibhikisho edolobheni. Ngoba ngokulunga isihlalo sobukhosi alwa amaqembu amaningi, kuhlanganise nezihlubuki,. Uyayidambisa izakhamuzi zaphumela kuphela zilethwa ukungenela amabutho. St uCyril wayengumuntu ephapheme kakhulu obzhivshis eMnyangweni, baba abafaneleki ifa namandla umbusi wokuziphilisa. Khona-ke kwaba call of the izikhathi. Imiphakathi yokuqala yamaKristu abazange kuphela zishumayele imfundiso kaZiqu phakathi heterodox kanye isiqondiso esingokomoya konke komhlambi wezimvu, kodwa futhi umthwalo omkhulu wemisebenzi yezehlalakuhle bona umphakathi.
Ekhulwini V iSonto oye wahlushwa izimfundiso eziningi zezihlubuki. Ngesikhathi umyalo kukaCyril wase-Alexandria zonke ezifundeni Novatians avalwa. Abaphila Besikhathi bayakufakazela ukuthi St uCyril hhayi kuphela led umzabalazo okuqinile ngokumelene esontweni futhi izinsalela amafilosofi amaqaba ekwazi ukwenza kodwa kwahluka nolaka kwamaJuda. Ukushushiswa amaJuda kwaholela itholene phezulu namabutho wamaRoma Orestes. USihlalo Egypt wavumela igunya Umbhishobhi obala ukulwa lokuhlubuka ka Nestorius ezathatha phezu kwesitulo kweConstantinople ngo 428. Igadango leli laqanjwa ngokuthi uCyril III WamaSonto Council, ivume ukuhlonipha Blessed Virgin Mary. Alexandria Church lendawo Wabusa iminyaka engu-32, washona ngo-nyaka 444. UCyril wayebhale incwajana ngokuhamba kwezinto eziningi azibhala uqhosha. Imisebenzi esivelele kunazo kukhona incazelo wemibhalo echaza imibhalo yenkolo ye izincwadi zabaprofethi eTestamenteni Elidala, iVangeli likaLuka, Ioanna Bogoslova futhi umyalezo we Umphostoli UPawulu.
isithombe Iconographic ka Kirilla Aleksandriyskogo
Isiko izithombe zobuKristu waqala endulo ngemvelaphi leSiriya no-Palestina. On imifanekiso ukuyichazela abangcwele ngokuhambisana nendlela yempilo emhlabeni. Ngokuvamile, isithombe olungokomfanekiso kudalwa ngesikhathi emcimbini ka nokunxusa. Esikhathini esithile phakathi Phumula yolungileyo, futhi nokunxusa kwakhe isifika eminyakeni engaphezu kweyishumi, futhi umfanekiso isithonjana abakwazi ngempela ukufanisa ngomfanekiso portrait. Ngeshwa, ngenxa nokugubha ekhulwini VIII ensimini ka-Byzantine baqede iconoclastic, imifanekiso eminingi yasendulo irretrievably elahlekile. Engafakwanga izithombe lasendulo, okuyinto ebonisa inzalamizi omkhulu wase-Alexandria, e-St uCyril. Isithonjana umklamo yesimanje okubonisa abakuKristu izambatho yesonto afanele inkonzo yakhe Episcopal. Ingxenye esiyisibopho Ukwakheka kuyinto Gospel izandla. Ngokuhambisana nesiko iconographic, egcizelela ngokumhlonipha imiBhalo, incwadi engcwele akusho ubambe isandla evulekile, futhi indwangu izingubo.
Saints Athanasius futhi uCyril wase-Alexandria
Memory of St uCyril, umbhishobhi omkhulu wase-Alexandria, kugujwa ngo-June 22 e isitayela esisha. Noko, libandla isungule hlonipho eyodwa ngaphezulu - Januwari 31. Lolu suku lugujwa ngokunqoba uCyril nomunye umfundisi ovelele kweBandla, eyandulela wakhe eMnyangweni Athanasius of Alexandria. ukugubha ahlangene imemori kuchazwa kuqashelwa impumelelo yabo kanye nezenzo evikela izimfundiso bagomele weBandla. Saints Athanasius futhi Cyril - omele ezimbili esikhulu catechetical School of Alexandria. Imibhalo yabo ibalulekile hhayi kuphela ukusetshenziswa isonto yangaphakathi, kodwa futhi kakhulu ezifanelekile zezenhlalo, izazi-mlando, izazi zokusebenza kwengqondo.
Umphostoli eMpumalanga Yurophu
Umnikelo kulenkhulu uye isiko telive letfu izelamani ezimbili, Kirill mina Mefody. Saints uCyril ngaphambi kokuthatha izifungo Izigodlo eyenziwa egameni uConstantine. Yena nomfowabo noMethodius wayevela emkhayeni zenzisa lwesiSlavic. Uyise wayengumlutha umkhuzi wempi ku emzini waseGrisi iThesalonika (yesimanje. Thessaloniki). UConstantine wathola indawo enhle kakhulu imfundo classical esigodlweni sombusi, ukuze ayamukela isidlaliso wesazi sefilosofi. Zaba abadumile ngenxa imisebenzi engakaze ibonwe ukufundisa izizwe Eastern Slavic. Ukuze umthelela ngempumelelo esigijimini sobuKristu iye iyawakha bafakwa kwegazi lwezinhlamvu entsha ngokuphathelene nezizwe Slavic abakhuluma izilimi ezihlobene. Simelele omunye Abadali yalesi lesikhumbuzo wabizwa ngokuthi Cyrillic. Into abazalwane Slavic kwahunyushwa izincwadi eziningi eyimidanti emaVangelini. Ukuze ukwazi ukuba sifake amasevisi lwesigodi kid-Slavic uConstantine owamiswa umbhishobhi. Ngaphambi nje kokufa kwakhe ngo-869, wathatha oda Izigodlo.
Kufanele kuqashelwe ukuthi abefundisi isiRashiya, isi-Serbian, Bulgarian nezinye Eastern amasonto Slavic isikhathi esingaphezu kweminyaka eyinkulungwane, sebenzisa iskripthi yasekuqaleni. Futhi uma ezilimini zanamuhla lezizwe kwabomndeni engaqondakali kakade komunye nomunye, ulimi yokukhulekela ngokuphelele ezifanayo. Feat wokushumayela uConstantine-Cyril akhiwa ingqondo yeSonto nabaPhostoli ukuxhaphaza, ngakho nokunxusa we saint elinikwe isihloko "elilingana bonke abaphostoli, 'futhi ngesikhathi Umkhosi on isethi Meyi 24 no-Febhuwari 27. Kuwo wonke esikoleni Orthodox endaweni udumo kuyinto isithonjana St uCyril, umnakekeli ingelosi nomvikeli abafundi kanye nothisha.
Izithombe uthisha lwamaSlav
izithombe yobuciko wothisha enkulu kugcwele umhlaba wonke. ungathola Umfanekiso eyiqiniso, oluveza St uCyril e-Orthodox baseMpumalanga Yurophu. Isithonjana has ahlukumeze eziningana canonically sivunyiwe. UConstantine-Cyril ngokuvamile uvezwa imvunulo monk-unkom 'idlayodwa. I izifungo wathatha okukhulu ikakhulukazi - schema. Lapho babambisane ngokubhala amabili abazalwane-othisha uCyril ukuboniswa kuphela ngemvunulo Izigodlo. Njengoba saint owamiswa, zikhona imifanekiso, lapho ebhaliwe izembatho yesonto imfundiso yombhishobhi. Njalo ezandleni saint Kuphakathi emqulwini Slavic zamagama, noma incwadi evulekile, ngokuvamile eVangelini likaJohane kusukela lokubhala emgqeni wokuqala. UCyril kudlulile, eneminyaka engaba 42 ubudala. Ngokwenkolelo yesimanje mayelana naleyo minyaka yena uchazwa. On the ambalwa uyasinda izithonjana lasendulo lwesiSlavic umnakekeli ingelosi St uCyril selivela ixhegu nge eside kunalokho, olunjengemfoloko ekupheleni intshebe.
usuku Saint sika
I Primate ka Lobu-Orthodox LaseRussia, ubungcwele baKhe Bishop of All Russia, Kirill wathatha leli gama lapho izithembiso zakhe Izigodlo. Igama elisha ibhaliswe njengendlalifa kuwuphawu renunciation kwesikhatsi lesengcile kanye ukuqala impilo entsha, lo ezincisha injabulo, inceku izimiso ehlukene ngokuphelele indlela yami yokucabanga. Kulokhu, lo saint engumxhasi hierarch esizayo esigodlweni sezindela waba uthisha lwamaSlav St uCyril. Umbhishobhi omkhulu eMoscow sikhombisa isibonelo sibonisa abavikela yayo saint. Ngokwe-Christian ezisohlwini lwezincwadi zeBhayibheli, ngosuku Angel lakhe liqinisekile ukuba wathola Esingcwele. May 24 emhlabeni Orthodox igubha umkhosi Slavic Ukubhala Namasiko. Ngosuku abavikela yayo saint, uMphathi Kirill Inkonzo saziso, ngangokunokwenzeka ethempelini, elalinikezelwe saint. Futhi, umuntu okholelwa ukuthi iqanjwe uCyril, uma efuna ngempela ukuhlonipha abavikela yayo saint, Kuze kube namuhla ukuba babe yingxenye ekukhulekeleni kwasobala, noma okungenani aye ethempelini ukuze isibani.
Kungakhathaliseki ukuthi abantu bayakukholelwa noma cha, imithetho emhlabeni engokomoya. Isifaniso kungenziwa kudwetshwe nge imithetho yemvelo. Ngisho noma abantu babeqala ukuzwa ngo-imithetho Newton kanye constants we ukusheshisa okudonsa, adonsela phansi jikelele izenzo, futhi azizwe sengathi angimnaki kubo kungase kuphazamiseke. Izwe Metaphysics namanje elinde abacwaningi yabo nabahloli bamazwe, inqobo nje kuyadingeka ukulalela isipiliyoni Kweminyaka esontweni. Ikhanga ongcwele ngokuvamile kuthiwa uyathandaza. Kukhona imithandazo okukakhenoni ukusetshenziswa yesonto, okuyinto engenza ukusetshenziswa ethembekileyo kulelikhaya. Umthandazo kuya zokuxhumana. UCyril lamaKristu Alexandria zibizwa ngokuthi umsizi ekuvikelweni ukulunga konke futhi ehlonipha. Ukulondolozwa kanye ukusakazeka kokholo awunakuba khona ngaphandle kokuthethelela wokushumayela. Impumelelo isikhulumi esekelwe ithalente, imfundo oluphelele kanye nokuzinikela. Ngakho umqondo liBandla inikezelwe zonke aspirants akhanyelwe St Cyril - unengelosi yakhe. umthandazo Equal belungile ukuveza isicelo ukunikezwa usizo lokunqoba embangweni anobuhlobo phakathi kwezizwe ekulondolozeni amasiko obaba bethu kanye namasiko.
Ukuvuma kanye iSidlo - amaSakramente ezibalulekile futhi esiyisibopho iSonto ngenxa yebhola lezinyawo
Kefir Ukudla isisindo ukulahleka: ukusetshenziswa kufanele kube ngokucophelela